၀ က်ဘ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် Google အမှန်တကယ်ကြိုးစားနေပါသလား။ | Martech Zone
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 14, 2009 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 19, 2015 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကဂူဂဲလ်သည်ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား site ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်မှာ blogosphere နှင့် SEO လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးသည်ဖောက်သည်များအားမိမိတို့၏ domains များကိုအများဆုံးအချိန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်စတင်အကြံပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ ပင်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် မကြာသေးမီက .. နှင့်သူငယ်ချင်းကောင်း PJ Hinton ကလက်ခံခဲ့သည် Compendium Blogware (မှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ)
ယခုတွင်မူဂူးဂဲလ်သည်၎င်း၏ချဉ်းကပ်မှုတွင်အနည်းငယ်ပိုပြီးရှေ့သို့တိုးတက်နေသည် Matt Cutts Google ကသဲလွန်စတွေကျဆင်းနေတယ် ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်အချက်တစ်ချက်အဖြစ်စာမျက်နှာဝန်ချိန်ကိုအသုံးချပါ။ ဤအရာအားလုံးသည်နွေးထွေး။ နားမလည်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားရိုးရိုးသားသားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုတာကနက်ရှိုင်းတဲ့အိတ်ကပ်ပါတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသာဂူဂဲလ်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာရနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတာလား။
ဒါက Google ရဲ့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုလား net ကတိုက်ရေး? ဒါမှမဟုတ်ငွေစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာလား။ ဂူးဂဲလ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ crawlers များသည်ယခုအချိန်အနည်းငယ်မျှသောဆိုဒ်များကိုတွားသွားနိုင်သည့်အချိန်တွင်ငွေစုဆောင်းမှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ နံပါတ်များသည်ကြီးမားသည်။
ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် Google သည်အရိပ်အမြွက်ကိုစပြီးငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သင်၏ဆိုဒ်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအဆင့်မြင့်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်ဆုချပါမည် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ စွမ်းရည်နှင့်အရင်းအမြစ်များရှိသောကုမ္ပဏီများအတွက်ဤအရာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်ကောင်လေးဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ဒေါ်လာအနည်းငယ်ဖြင့် GoDaddy တွင်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ငယ်တစ်ခုသည်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာသော loadsharing, cache, web acceleration (သို့) cloud နည်းပညာများဖြင့်ကုန်ကျသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိသောကုမ္ပဏီနှင့်မည်သို့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်နည်း။
ကျနော့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်မှာတော့အဲဒါဟာကျိန်းသေတယ်လို့ထင်ပါတယ် ဆိုးသော ဘေးထွက်။ ကဲချိုးလိုက်ရအောင်:
ဒါက Google ကိုပိုက်ဆံပိုပေးရတယ်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာဖြည်းဖြည်းလုပ်ဆောင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအပြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုပိုမိုသုံးစွဲရန်နှင့်သူတို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုအရှိန်မြှင့်ရန် Google ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကကောင်းတဲ့ PR မရှိပါဘူး။
အဲဒီအစား, Google ၏အောက်ရှိအတွက်ပြု ဝဘ်အတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်.
ဒါက site ကိုမြန်နှုန်းကပြောသည် is အရေးကြီးတယ် လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုတယ် bounce နှုန်းလျှော့ချရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုများတိုးမြှင့်ဖို့။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ကျန်ရှိနေသေးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Google ကဤအရာကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါ၎င်းသည်စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်တော့ပါ။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်တိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာမှထွက်သွားလိမ့်မည်။ အဲဒါမျှတတယ်လို့မထင်ဘူး၊ ပြီးတော့အဲဒါဟာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်ကိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းပါးသောကြောင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုများသည်အကျိုးအမြတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်သည်။
ဂူးဂဲလ်ကဒီအချက်ကိုဂရုပြုချင်လိမ့်မည်။ Bing သည်နေ့တိုင်းကောင်းမွန်စွာကြည့်နေတတ်သည် Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း!) ။
Tags: ဂူဂဲလ်လောဘ+ googleလောဘကြီးခြင်းစာမျက်နှာမြန်နှုန်းမြန်နှုန်း
14:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 7, 22
၁။ ကျွန်ုပ်၏ hosting ကုန်ကျစရိတ်ကိုသုံးဆလောက်။
၃။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကို (တိုး။ ) တိုးသည်။
14:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 7, 32
Dave ကိုမမေ့ပါနှင့်…သင်အဲဒီလိုလုပ်ပြီးနောက် crap content ကိုရေးနိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာရေးခြင်းအတွက်သင်ပိုမိုအလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစိုးရိမ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့… IE, Firefox, Safari တို့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့… Google Chrome ကိုမြန်မြန်မြန်အောင်လုပ်လိုက်ပါလား။
15:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 32
ကောင်းစွာရေးသားခဲ့သည်အပိုင်းအစ Doug ။ ဤနေရာတွင်ရှင်းလင်းစွာသက်သေပြခဲ့သည့်အတိုင်းဂူဂဲလ်သည် 'မကောင်းမှုမပြုပါ' ဟူသောကတိကိုသာပိုပိုပြီးတိုးများလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားရှေ့သို့ဆွဲဆောင်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ Yahoo! 2001-3 ခုနှစ်တွင်၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှေးမှိန်အဖြစ်။ သူတို့ယခုဘယ်မှာကြည့်ပါ။
15:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 23
အဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဘယ်ဂူဂဲလ်ကဘယ်ချိတ်ဆက်မှုအများဆုံးချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုစတင်ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြည်သူလူထု၏အသံကိုအသုံးချခြင်းမှရှောင် ထွက်၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများကိုပြဌာန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ဖောက်သည်တွေဘာကိုမှန်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နေတယ်။
16:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 06
ငါမကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ခြင်းကိုမုန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် Google ကပုံမှန်အားဖြင့်အပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ SE world ဟာအကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်လာတယ်။ CNN လမ်းမှာကြည့်ရှုသူနဲ့ကြော်ငြာဝင်ငွေတွေတိုးပွားလာအောင်တောင်ကြီးကနေတောင်တွေကိုဖန်တီးပေးတယ်။ ရှုခင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံသည့်တိကျသောအပြောင်းအလဲများကိုဂူဂဲလ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲသည်။ များသောအားဖြင့် Google ၏အပြောင်းအလဲများကိုကျယ်ပြန့်သောတံဆိပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ ဒီတင်ပို့မှုပြောင်းလဲမှုဟာအချက်တစ်ခုဖြစ်လာရင်၊ အများစုဟာရယူနိူင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ Mountain View ရဲ့ယောက်ျားလေးတွေတောင်မှသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ဝေစုကိုသတိရနေပြီးသူတို့ဟာလူအများစုကိုအယူခံမ ၀ င်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရှယ်ယာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။
ထို့အပြင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှအကြောင်းအရာကိုလက်ခံရန် GoDaddy ကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်သုံးသင့်သည် (အတွေ့အကြုံအရ) သူတို့ရဲ့တင်ပို့တဲ့အချိန်ဟာသူတို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှသုံးစွဲသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 16
Doug = အကြောက်လွန်ရောဂါ။ 😐
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 20
Yup ၏စစ်မှန်သောဂူဂဲလ်သည်ဝက်ဘ်ကိုရယူရန်ကြိုးစားနေသည်။ သူတို့မှာယခုအချိန်အတော်အတန်ကြာနေပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးလိုပဲ၊ များများသုံးလေတစ်ခုခုကလူများများကပိုပြီးညည်းညူလေလေပါပဲ။
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 12
ကျနော်တို့နှစ်ဖက်သန်သောထားနှင့်ဆက်ဆံနေကြသည်ထင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင်သင့်အနေဖြင့်ပြုမူနေသောကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု…ကောင်းကောင်း…ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုရှိသည်။ ကုန်ကျစရိတ်များသည်အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်ပြီးသူတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစေရန်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုလုပ်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဂူးဂဲလ်သည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ အသုံးပြုသူအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် web အတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ ဝဘ်သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှဂူဂဲလ်သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ အထူးသဖြင့်ထိရောက်မှုမရှိသောဆိုဒ်များကိုစစ်ထုတ်ခြင်းသည်ဂူဂဲလ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို ပို၍ တန်ဖိုးစေသည်။ ဒါကိုအထူးသဖြင့်မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ငွေအမြောက်အမြားကိုဖြုန်းတီးစရာမလိုဘဲအမြန်နှုန်းတိုးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 36
ငါထင်တာကတော့ဒါက Google ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာအနည်းဆုံးမကောင်းတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ သူတို့ကဝဘ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အနေအထားမှာရှိတယ်။ စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသိသိသာသာမသက်ရောက်စေသည့်တိုင်လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တစ်ခုလုံး၏ site အမြန်နှုန်းကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်ရလဒ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောဝဘ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည်။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ဝဘ်၏လက်ရှိအခြေအနေအရပျမ်းမျှ ၀ က်ဘ်ဆိုက် (ယောက်ျားလေးကြီးများအများစုပင်လျှင်) သည်အလွန်ဆိုးဝါးသောမှားယွင်းမှုများကိုပြုလုပ်နေကြသဖြင့်အနိမ့်အမြင့်ပါသောသစ်သီးတစ်မျိုး * ရှိသည်။ Firefox တွင် YSlow နှင့် Google PageSpeed ​​plugins ကိုထည့်သွင်းပါ၊ ပြီးနောက်သင့်အားပေးသောအချို့အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ၎င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်ကိုသာလိုက်နာရုံဖြင့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမည်သည့် site ကိုမဆိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
တနည်းကား ... သင်အမှတ်ပျောက်နေပါတယ်။ ၉၉% သောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဆိုဒ်များကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အရင်းအမြစ်များမရှိပါ - သူတို့သည်စီးပွားရေးတွင်သာနေရန်ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်သည်။ အမြန်နှုန်းဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူး။ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာကိုတင်ချိန် ၂ စက္ကန့်အောက်ရောက်အောင် Amazon နဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီလူတိုင်းအတွက်တစ်ခု option ကိုကြောင်းငြင်းခုန်။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး!
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 53
Doug, ၂ စက္ကန့်အတွင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်အချိန်ကိုရရန် Amazon နှင့်သင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားသောဆိုက်၏ URL မှာဘာလဲ။
ခင်ဗျားဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုနားလည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းနဲ့မတူတာက YSlow မှအကြံပေးချက်အများစုသည်အခြေခံ HTML ရေးသားရန်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိသူတစ် ဦး ဦး ကလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းရောင်းချသောကုမ္ပဏီတွင် HTML ကိုတည်းဖြတ်သူတစ် ဦး ရှိသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက SERP များတွင်အဆင့်မမြင့်ခြင်းထက်ပြproblemsနာများပိုများလာသည်။
YSlow တွင်သင့်အားလုပ်ငန်းစဉ်အားလမ်းလျှောက်ရန်အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများစွာရှိသည်။ “ High Performance Websites” ကဲ့သို့သောစာအုပ်များပင်ကောင်းမွန်စွာရေးသားထားသောကြောင့်လျင်မြန်စွာဖတ်နိုင်သောကြောင့်သင်ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သည်။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစာဖတ်ခဲ့တယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတောင်ထိတဲ့သူတိုင်းကိုငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ်။
ငါပြောသမျှအားလုံးသည်လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံကိုနားမလည်ဘဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်မမြန်ပါနှင့်။
17:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 02
ငါငါ့ဥစ္စာရှိသမျှကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ပုံများနှင့်အကြောင်းအရာဖိုင်များကို Amazon S3 သို့ပို့သည်။ ဒိုမိန်းမျိုးစုံမှ၎င်းတို့၏စွမ်းအားနှင့်ဝန်များပေါင်းစပ်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏ဝန်အချိန်ကို ၁၀ စက္ကန့်မှ ၂ စက္ကန့်အောက်အောက်သို့လျှော့ချခဲ့သည်။ Re: "အွန်လိုင်းရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ ... " - လူတိုင်းအခုဒန်ကိုအွန်လိုင်းရောင်းကြတယ်။ လူတိုင်းတွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ အများစုသည်ထိုပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များမရှိကြပါ။
16:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 9, 17
ငါဒါကိုမကောင်းတဲ့အရာလို့မြင်တယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်သောမည်သည့် link ကိုမဆို (search engine မှဖြစ်စေအခြားမည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ) အလွန်လျှင်မြန်စွာဖွင့်ရန်လိုသည်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာ ၂ ခုသည်ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် algorithm ၏အခြားရှုထောင့်အားလုံး၌ပင်ရှိနေလျှင်မြန်လျှင်မြန်သောဝန်သည်ပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်နားလည်သည်။
ငါ Cutts အင်တာဗျူးအားလုံးဖမ်းခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့သူက page load time ဟာရှာဖွေရေးအဆင့်မှာပိုမိုအားကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာလား၊ သက်ဆိုင်မှု၊ အခွင့်အာဏာလား၊ ငါတို့လက်ရှိအသုံးပြုနေသောအခြားအချက်များလား။
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 52
၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်အနေနှင့်သင်အလိုရှိသည်။ ဂူဂဲလ်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည် algorithm ကိုခြေရာခံသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိုမိုမြန်ဆန်သောစာမျက်နှာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Doug, သင် SAAS မတိုင်မီအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုခုနှေးကွေးနေလျှင်၊ ၎င်းကိုမှီခိုနေသောအချက်များမဟုတ်ဘဲလျှောက်လွှာပေါ်တွင်မကြာခဏအပြစ်တင်လေ့ရှိသည်။ ရှာဖွေမှုပြီးနောက်တင်ရန် ၁၀ စက္ကန့်စောင့်ရသည့်အခါသင်၏အတွေ့အကြုံသည်မည်မျှစိတ်ပျက်စရာကောင်းသနည်း။ စာမျက်နှာရာထူးအတွက်လူတိုင်းပြောသကဲ့သို့ "ဆိုးညစ်သော" မဟုတ်ဘဲညီမျှခြင်းသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂူဂဲလ်၏စာမျက်နှာတွင်နည်းပညာနှင့် bandwidth များပါရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်မြန်ဆန်သောကြောင့်လူအများကစာမျက်နှာများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုပိုမိုတည်ဆောက်လိုကြသည်။
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 14
အချက်တစ်ခုအဖြစ်မြန်နှုန်းအပေါ်အဘယ်သူမျှမသဘောထားကွဲလွဲ, Dale ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သူ့ဟာသူအမြန်နှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ဂူဂဲလ်၏စာမျက်နှာများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးသည်မြန်ဆန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Google Map API ၏ KML parser ကိုပြန်လည်ရေးသားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဇင်ပေါင်းတစ်ဒါဇင်ကျော်သောမှတ်တမ်းများကိုအလုပ်လုပ်ရန်။ အကယ်၍ Yahoo! လျှင်ဂူဂဲလ်မြေပုံများကို သုံး၍ လူများကိုစွန့်ခွာမည်လား။ မြေပုံများသည်ဝန်ပိုမြန်ချိန်ရှိပါသလား။ ငါ့ကိုမထင်!
17:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 12
ခရစ်စတိုနဲ့သဘောတူပါတယ် တကယ်တော့ဂူဂဲလ်ကိုကမ္ဘာတစ်လွှားကလူသန်းပေါင်းများစွာကအသုံးပြုကြတာပါ။ ဒါကမပြီးပြည့်စုံပါဘူး၊ Google ကပိုက်ဆံလိုချင်လား။ အဘယ်သူသည်ယနေ့ငရဲ doesnt; သူတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လို့သူတို့ဟာကြင်နာတတ်ပြီးလောဘကြီးတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလား။ 21 ရာစု!
ဒီဇင်ဘာ 1, 2009 မှာ 1: 21 AM
ဒါပေမယ့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာဘယ်လောက်အထိဖြစ်မလဲ။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များရှိလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ Microsoft ကဲ့သို့သော monoliths များသည်ကြီးမားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိပြီးများသောအားဖြင့်အကြောင်းအရာများစွာရှိသောကြောင့်သင်၏ပျှမ်းမျှအသေးစားစီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ထက်ပိုများနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စာမျက်နှာဝန်ချိန်လျှော့ချရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုတွင်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိသည်။
ဂူဂဲလ်အတွက်စာမျက်နှာများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ဆိုးသည်ဟုမထင်ပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင်တောင်မှကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲထိခိုက်လိမ့်မယ်။